Kobo Forma, एक फरक "आकार" को साथ एक महान ereader | सबै ईरेडरहरू
कोबो फोर्मा, एक फरक "आकार" को साथ एक महान ereader
वर्षौं अघि, ereader- सम्बन्धित कम्पनीहरूले सेप्टेम्बर र अक्टुबरलाई नयाँ उपकरण सुरुवातको लागि महिनाको रूपमा चिन्ह लगायो। महान अमेजनले पहिले नै त्यो रिवाज छोडेको छ तर यस्तो लाग्छ कि यसको ठूलो प्रतिद्वन्द्वीले गरेको छैन। कोबो रकुतेन, ईमेडरको बजारमा अमेजनको सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी, भर्खर कोबो फोर्मा भनिने नयाँ eReader लाई प्रस्तुत गर्‍यो.
यस नयाँ eReader लाई पहिले नै FCC रेजिष्ट्रेसनको लागि धन्यवाद ट्र्याक गरिएको थियो तर सबैले सोचे कि यसलाई कोबो आभा वन २ वा कोबो आभा टू भनिन्छ, तर नाम परिवर्तन भयो, साथै यसको आकार पनि। नयाँ कोबो फोर्मा एक eReader को साथ हो फरक नाम र बिल्कुलै फरक प्रकार.
कोबो फोर्माको रूप र आकार सबै बारेमा छ किन्डल ओएसिस, एक ereader जुन एक तर्फ होल्ड गर्न सकिन्छ र यसले गाह्रो वातावरणमा पढ्न सजिलो बनाउँछ जस्तै ओछ्यानमा पढ्ने।
कोबो फोर्माले एक-हात पढ्ने अनुमति दिन्छ साथै औँलाको केहि ट्यापहरूको साथ यन्त्रको नियन्त्रणलाई। र अन्य मोडेलहरू भन्दा फरक, कोबो फोर्माले स्क्रिन फ्लिपिंगलाई अनुमति दिन्छ, जसको मतलब हामी दिशा बदल्न सक्दछौं र यसैले pdf कागजात पढ्न मद्दत गर्दछ.
कोबो फोर्माले यसको-इन्च स्क्रीन राख्दछ पत्र एचडी टेक्नोलोजी र d०० डीपीआईको रिजोलुसन। टचस्क्रिन हुनुको साथै, कोबो फोर्मामा ब्याकलिट डिस्प्ले छ।
स्क्रिनको साथसाथै बाँकी उपकरणमा मोबियस टेक्नोलोजी पनि छ जसले स्क्रिनलाई केवल अधिक प्रतिरोधी मात्र बनाउँदछ अधिक लचिलो र प्रतिरोधी उपकरण। कोबो फोर्मासँग जारी छ, आफ्ना ठूला भाइहरू जस्तै, आईपीएक्स certificate सर्टिफिकेट जसले उपकरणलाई आघात, खरोंच र पानी प्रतिरोधी बनाउँछ।
यो नयाँ ereader मोडेल पातलो र कोबो आभा वनको भन्दा हल्का छ gr 197० को वजन। यस्तो कुराले धेरै प्रयोगकर्ताहरू बनाउँदछ, सुत्ने कोठाको उत्सुक पाठकहरू, घन्टाहरूसम्म पढ्नको लागि कलाईमा असुविधा बिना।
यो नयाँ कोबो ईरेडर यो अर्को अक्टुबर २ until सम्म स्पेनमा खरीद गर्न सकिदैन र यो अक्टुबर १ from देखि बुक गर्न सकिन्छ। कोबो फोर्माको मूल्य २16। .279,99eयुरो हुनेछ, किन्डल ओएसिस भन्दा e० युरो महँगो। मूल्य कुनै पनि किफायती छैन यदि हामी यसलाई एक सामान्य ईरेडरसँग तुलना गरौं, तर हामीले भन्नु पर्छ कि कोबो फोर्मा सामान्य वा कम-अन्त eReader होइन, तर एक प्रीमियम उपकरण हो, त्यसैले गुण / मूल्य अनुपात काफी सन्तुलित छ।
अन्य ईडरहरू जस्तो नभई, कोबो फोर्माले खुला ईबुक ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ हामी कुनै पनि अनलाइन स्टोरमा ईबुकहरू किन्न सक्छौं र तिनीहरूलाई उपकरणमा पढ्न सक्छौं। थप रूपमा, कोबो र Fnac भर्खरै सेनामा सामेल भए, जसको अर्थ हो कि स्पेनिश प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो अधिकारमा स्पेनी भाषामा १ 130.000०,००० भन्दा बढी ई-पुस्तकहरूको सूची तयार गरेका छन् र ती मध्ये १ 15.000,००० पुस्तकहरू निःशुल्क छन्।
चाँडै हामी हाम्रो नयाँ वेबसाईटमा यो नयाँ कोबो उपकरणको विश्लेषण गर्ने छौं, तर यस्तो देखिन्छ कि सबै कुराले संकेत गर्दछ कि कोबो क्र्याकको लागि एक ठूलो प्रतिद्वन्द्वी छ। तिमीलाई लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै ईरेडरहरू » कम्पनीहरु » कोको » कोबो फोर्मा, एक फरक "आकार" को साथ एक महान ereader
यो राम्रो देखिन्छ। मैले एक महिनाको लागि ओएसिस २ चलाएर देखें र यो अचम्म लाग्यो। मैले यसलाई मूल रूपमा फिर्ता गरेको छु किनकि म धेरै पढिरहेको छैन (मैले यसको फाइदा लिइरहेको छैन, आउनुहोस्, म कमजोर वर्षको लागि पढ्दै छु) र साथै ब्याट्रीले मलाई विश्वास गर्दैन। यो एक हप्ता मात्र चलेको थियो, किताब होइन। धेरै हप्ता सम्म चलेको पेपरहाइट भन्दा धेरै कम।
अर्को कुरा यो पनि यो कि यो एक हातले पक्रन अलि गह्रौं देखिन्थ्यो, तपाईले यसको ह्या hang प्राप्त गर्नुपर्दछ र यसले बटनको व्यवस्था परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने कुरा सहयोग हो।
योसँग सब भन्दा ठूलो स्क्रिन छ र यो अलि भारी छ, म कन्फोरलाइट चीज मन पर्छ (अमेजनले यसको प्रतिलिपि बनाउन धेरै समय लिइरहेको छ) र हामीले हेर्नुपर्दछ कि ब्याट्रीले कसरी ह्यान्डल गर्छ।
एउटा कुरा ... मैले सोचें कि बटनहरू बाहेक स्क्रिन छुनुहोस्, हैन? मलाई लाग्छ यो स्पष्ट छ तर मैले यो विशेष विवरणहरूमा देखेको छैन।
मूल्य उच्च छ तर यो फरक पाठक हो। मलाई त्यो मनपर्‍यो होला यदि अधिक क्षमता वा मेमोरी कार्ड रिडर भने।
ठिक छ ... म समीक्षा Jaquín with को साथ अधीर छु
मूल्य के हो, तपाईं यसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ र तपाईं यसलाई उल्लेख गर्नुहुन्न ...
टोनिनोलाई जवाफ दिनुहोस्
मूल्यको बारेमा माफ गर्नुहोस्, यो एक डाटा हो जुन यति धेरै प्रकाशित भएको छ कि मैले यसलाई लिने अधिकार दिएको छु। जहाँसम्म मलाई थाहा छ, कोबो फोर्माको टच स्क्रिन छ, आउनुहोस्, स्क्रिन टच नगरेको खण्डमा यो पूर्ण ढिलाइ हुनेछ।
तपाइँ किन्डल ओएसिसको बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्ने बारे, यो आश्चर्यजनक छ, सामान्यतया ब्याट्री यति छोटो छैन। हुनसक्छ तपाईसँग एउटा दोषपूर्ण एकाई छ।
पढ्न र टिप्पणी गर्न को लागी धन्यवाद। शुभकामना!!!
जोआकन एक कुरा, तपाईसँग परीक्षणको रूपमा यस मोडेलको एकाई लाग्ने भएकोले के तपाई शब्दकोशको शीर्षक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ? र तपाईं कोबोमा अमेजनमा किन्नुहुने पुस्तकहरू पढ्न सक्नुहुन्छ?
हाई जावि, शब्दकोशको बारेमा तपाई के जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईले एमेजोनमा खरिद गरेको इबूकहरूको बारेमा, सिद्धान्तमा तपाइँ सक्नुहुन्न। त्यो हो, तपाईं सीधा गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईं क्यालिबर मार्फत यो गर्न सक्नुहुनेछ। यसको कारण यो हो कि अमेजनले मात्र तपाईंलाई तिनीहरूको प्रारूपमा उनीहरूका ईबुकहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ र तिनीहरू बाँकी ईरेडरहरू द्वारा समर्थित छैनन्। तर क्यालिबरलाई धन्यबाद, रूपान्तरण कुनै समस्या बिना गर्न सकिन्छ।
शब्दकोषहरूको सन्दर्भमा, मेरो मतलब यदि यसले तिनीहरूसँग समावेश गरेको छ भने। स्प्यानिश को? स्पेनिश अंग्रेजी?
र अमेजन पुस्तकहरूको सन्दर्भमा, म ती संकेतहरू गरिरहेको थिएँ कि तिनिहरूलाई अमेजनबाट सिधा ईरेडरमा पठाउन सकिन्छ कि भनेर, तर मैले आफैंलाई पहिले नै उत्तर दिएँ: यो मूर्ख छ। स्पष्ट छैन।
म तपाईको ब्ल्गमा बधाई दिन्छु, कोबो फोर्माको लागि, तिनीहरूले यसलाई केवल GB जीबीको साथ पेच गरेका छन, किनकि त्यो साइजले तपाईलाई अध्ययन पीडीएफ र कमिकको साथ प्रयोग गर्न आमन्त्रित गर्दछ, ओएसिसमा GB२ जीबी संस्करण छ, कागजमा समेत एउटा GB२ जीबी संस्करण जापानीहरू मa्गाका फ्यान हुन्, अडियोबुकका लागि विकल्पसहित GB२ जीबी संस्करण यस ईडररसँग उत्तम हुनु हुँदैन र मैले मेरो पैसा खर्च गर्नु योग्यको छ।
क्यान्टरोलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग क्रिसमसदेखि कोबो फोर्मा छ र यो पढ्न साँच्चै आनन्द लाग्छ, धेरै कन्ट्रास्ट, तपाईंको आँखाको लागि उपयुक्त प्रकारहरू समावेश गर्न सजिलो, यसलाई लगाउने तरिका र या त स्क्रिन थिचेर वा बटनबाट पढ्न सक्षम हुनुहोस्। त्यो हातको उचाईमा छ। सार्वजनिक यातायातमा बोक्न र पढ्न वास्तवमै सहज छ जहाँ उसले यसको धेरै फाइदा उठाए। यद्यपि मेरो विचारमा, अन-अफ-रेस्ट बटन सानो छ, पहुँच गर्न गाह्रो छ, पक्षमा अवस्थित समय हुन्छ जब तपाईले यो फेला पार्न सक्नुहुन्न र यदि तपाईले यो भन्दा थोरै मात्र थिच्नुहुन्छ, किनकि तपाईले यसलाई मुश्किलले देख्नुहुनेछ, तपाइँ आराम गर्न छोड्नुको सट्टा पाठक बन्द गर्नुहोस्। तिनीहरूले यस पक्षलाई सुधार गर्नुपर्नेछ जुन यसको मूल्यसँग छ।
पैट्रिक्स लाई जवाफ दिनुहोस्
2017 "किन्डल ओएसिस २०१7समीक्षा